कन्वेयर गियरबक्स मर्मत, पेचदार गियरबक्स मर्मत
कन्वेयर गियरबक्स र पेचदार गियरबक्स मर्मत
गीयरबक्स कसरी कायम गर्ने?
400 घण्टा वा3महिना को बारेमा नयाँ गियरबक्स प्रयोग भइसके पछि, लुब्रिकेशन परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। पछि, तेल परिवर्तन चक्र प्रत्येक 4000 घण्टा को बारे मा छ; कृपया लुब्रिकेशनका विभिन्न ब्रान्डहरू मिक्स-प्रयोग नगर्नुहोस्। यसले गीयरबक्स हाउजि in्गमा ल्युब्रिकेसनको पर्याप्त मात्रा राख्नु पर्छ र यसलाई नियमित रूपमा जाँच गर्नुपर्दछ। जब यो फेला पारियो कि लुब्रिकेशन बिग्रिएको छ वा राशि घटेको छ भने, लुब्रिकेशन परिवर्तन गर्नुपर्दछ वा समयमै भरिनुपर्दछ।
गियरबक्स ब्रेकडाउन हुँदा हामीले के गर्नुपर्छ?
जब गियरबक्स ब्रेकडाउन हुन्छ, पहिले अंशहरू विच्छेदन नगर्नुहोस्। कृपया हाम्रो विदेश व्यापार विभागमा सम्बन्धित बिक्री प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र नेमप्लेटमा देखाइएको जानकारी प्रदान गर्नुहोस्, जस्तै गियरबक्स विशिष्टता उत्तर सिरियल नम्बर; समय प्रयोग; गल्ती प्रकारका साथ समस्याग्रस्तहरूको मात्रा। अन्तमा उचित कार्य लिनुहोस्।
कसरी गियरबक्स स्टोर गर्ने?
a) वर्षा, हिउँ, आर्द्रता, धुलो र प्रभावबाट सुरक्षित।
बी) गियरबक्स र जमिन बीच काठ ब्लकहरू वा अन्य सामग्री राख्नुहोस्।
ग) खोलिएको तर प्रयोग नभएको गियर इकाईहरू उनीहरूको सतहमा एन्टी-रस्ट तेलको साथ जोडिनु पर्छ, र पछि कन्टेनरमा फिर्ता फिर्ता जानुहोस्।
d) यदि गियरबक्स २ बर्ष वा सोभन्दा बढी समयको लागि भण्डार गरिएको छ, कृपया सफाई र मेकानिकल क्षति जाँच गर्नुहोस् र नियमित जाँचको बेला एन्टि-रस्ट लेयर अझै छ कि छैन।
गियरबक्स चल्ने क्रममा जब असामान्य र आवाज आयो हामी के गर्नुपर्छ?
यो गियर्सको बीचमा असमान जाल वा असर भाँचिएको कारणले गर्दा राम्रोसँग हुन्छ। सम्भावित समाधान लुब्रिकेशन र बेयरिंगहरू परिवर्तन गर्न जाँच गर्नुहोस्। यसबाहेक, तपाईं हाम्रो सल्लाह प्रतिनिधिलाई थप सल्लाहको लागि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ।
तेल चुहावटको बारेमा हामी के गर्ने?
गियरबक्सको सतहमा बोल्टहरू कडा पार्नुहोस् र एकाई अवलोकन गर्नुहोस्। यदि तेल अझै लीक भइरहेको छ भने, कृपया विदेश व्यापार विभाग मा हाम्रो बिक्री प्रतिनिधि सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईंको गियरबक्सहरू कुन उद्योगहरूमा प्रयोग भइरहेको छ?
हाम्रो गियरबक्सहरू कपडा, खाद्य प्रसंस्करण, पेय पदार्थ, रसायन उद्योग, एस्केलेटर, स्वचालित भण्डारण उपकरण, धातु विज्ञान, ट्याबको, वातावरणीय संरक्षण, रसद र आदि क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
के तपाईं मोटरहरू बेच्नुहुन्छ?
हामीसँग स्थिर मोटर आपूर्तिकर्ता छन् जो हामीसँग लामो समयदेखि सताइरहदै आएका छन्। तिनीहरू उच्च गुणवत्ताको साथ मोटर्स प्रदान गर्न सक्दछन्।
तपाइँको उत्पादन को वारंटी अवधि के हो?
जहाज छोड्ने मिति चीन छाडे पछि हामी एक बर्षे युद्दको प्रस्ताव गर्दछौं।
कुनै प्रश्न? हमीलाई पछ्याउनुहोस !
इलेक्ट्रिक मोटर को प्रकारहरु
प्रेरण मोटर, एसी मोटर
मेकानिकल चर गति ड्राइव
हेलिकल गियर, वर्म गियर, ग्रह गियर, ग्रह गियर मोटर, साइक्लोइडल गियर, सर्पिल बेभल गियर मोटर, वर्म गियर मोटर्स, साइक्लोइडल गियर मोटर
छविहरूका साथ गियरबक्सका प्रकारहरू
हेलिकल गियर, सर्पिल बेभल गियर, बेभल गियर
इलेक्ट्रिक मोटर र गियरबक्स संयोजन
Sumitomo प्रकार साइक्लो
इलेक्ट्रिक मोटर को लागी कमी गियरबक्स
बेवेल गियर बक्सलाई स्कीउ गर्नुहोस्
सर्पिल बेभल गियर, बेभल गियर